Sierra Leone neGuinea: Mazuva Okutanga (Chikamu 1) | Bhuku Regore ra2014
Chiedza cheChokwadi Chinotanga Kupenya
Mashoko akanaka akasvika muSierra Leone muna 1915 vagari vemo pavakadzoka kubva kuEngland vachiuya nemabhuku anotsanangura Bhaibheri. Munenge muna July wegore iroro, mushumiri waJehovha wokutanga ainge akabhabhatidzwa akasvika muFreetown. Ainzi Alfred Joseph. Aiva nemakore 31 uye ari chizvarwa chomuGuyana, kuSouth America. Akanga abhabhatidzwa pakutanga kwegore iroro muBarbados, kuWest Indies, uye ainge aita kondirakiti yekushanda semutyaira wezvitima muFreetown. Alfred aigara mudzimba dzeraruwe muCline Town, yaiva kure nemakiromita 3,2 kubva kwaiva nemuti weCotton Tree muFreetown. Akabva angotanga kuudza vaaishanda navo mashoko eBhaibheri.
Gore rakatevera racho, Alfred akabatana naLeonard Blackman, waainge amboshanda naye kuBarbados, uyo aiva naamai vainzi Elvira Hewitt, avo vakatanga kuudza Alfred nezvechokwadi. Leonard akava muvakidzani waAlfred, uye vaigara vachisangana kuti vakurukure nezveBhaibheri. Vaigoverawo mabhuku anotsanangura Bhaibheri kushamwari dzavo nevamwe vanhu vaifarira.
Alfred naLeonard vakaona kuti minda yeFreetown yakanga “yachenera kukohwa.” (Joh. 4:35) Muna 1923, Alfred akanyorera kumuzinda wenyika yose kuNew York, achiti: “Vanhu vakawanda kuno vari kufarira Bhaibheri. Mungatumira mumwe munhu here kuti azovatarisira uye kuti azobatsira pakusimudzira basa rokuparidza muSierra Leone?” Akapindurwa kuti: “Mumwe munhu achatumirwa!”
William “Bible” Brown nemudzimai wake, Antonia
Alfred akati, “Papera mwedzi yakati kuti, rimwe zuva uri Mugovera pakati pousiku, ndakangoerekana ndafonerwa.”
Ndakabvunzwa kuti, “‘Ndimi here makanyorera kuWatch Tower Society muchikumbira vaparidzi?’
Munhu wacho akati nenzwi rakasimba, “‘Zvakanaka, vakatumira inini.’
“Raiva inzwi raWilliam R. Brown. Iye nomudzimai wake, Antonia, nemwanasikana wavo mudiki vakanga vasvika musi iwoyo uye vaigara kuGainford Hotel.
“Mangwanani acho akatevera, ini naLeonard taiita chidzidzo chedu cheBhaibheri chevhiki nevhiki pakasvika mumwe murume muhombe padhoo. Aiva William R. Brown. Aishingairira chokwadi zvikuru zvokuti aitoda kupa hurukuro yavose mangwana acho chaiwo. Takabva tangohaya imba yaiva hombe kupfuura dzose muFreetown yainzi Wilberforce Memorial Hall—ndokuronga kuti pahurukuro dzavose ina yokutanga ipiwe manheru eChina chaitevera.
“Kapoka kedu kakabatikana kuzivisa hurukuro dzacho kuburikidza nemapepanhau, mahendibhiri uye nemuromo. Taisaziva kuti vanhu vomunharaunda yacho vaizoita sei, asi taisafanira hedu kunetseka. Vanhu vanenge 500 vakatutirana muimba yacho, kusanganisira vafundisi vakawanda vemuFreetown. Takafara zvokufara zviya!”
Muhurukuro yavo yainge yakareba awa imwe chete, Hama Brown vakataura Magwaro akawanda zvikuru uye vakashandisa masiraidhi kuti varatidze magwaro eBhaibheri pasikirini. Panguva iyi, vakadzokorora vadzokororazve kuti, “Kwete kuti Brown anoti asi kuti Bhaibheri rinoti.” Vateereri vakakangwa mate mukanwa, uye vaiombera maoko pashure pepfungwa imwe neimwe yavaitaura. Chakanyanya kuvafadza hakusi kugona kutaura kwaHama Brown, asi kupa kwavaiita uchapupu hwakasimba hwepaMagwaro. Izvi zvinoratidzwa nezvakataurwa nemumwe wechidiki aidzidza nezvechitendero kuti, “VaBrown vanoziva Bhaibheri ravo!”
Hurukuro dzaHama Brown dzakakurudzira vanhu vemuguta racho, uye vakadirana kuti vadzinzwe. Musi weSvondo wakatevera, pakauyazve vanhu vakawanda kuzonzwa hurukuro yaiti, “Kuenda kuHero Nokudzoka—Ndivanaani Variko?” Chokwadi chine simba chakapiwa naHama Brown usiku ihwohwo chakaita kuti kunyange vanhu vaizivikanwa zvikuru nokuenda kuchechi vasiye machechi avo.
Hurukuro yokupedzisira paina dzacho yaiti, ‘Mamiriyoni Ari Kurarama Iye Zvino Haazombofi,’ yakaita kuti vanhu vakawanda chaizvo vauye zvokuti mumwe mugari wemuFreetown akazoti, “Machechi aisafanira kuita minamato yawo yemanheru nokuti nhengo dzawo dzose dzainge dzaenda kunonzwa hurukuro yaHama Brown.”
Nemhaka yokuti Hama Brown vaigara vachishandisa Bhaibheri, vachisimbisa kuti ndiro rine chokwadi, vanhu vakatanga kuvashevedza kuti “Bible” Brown. Vakaramba vachizivikanwa zvikuru nezita iroro remadunhurirwa muWest Africa yose. Uye kusvikira paakapedza upenyu hwake hwepasi pano, William R. Brown aidada nokushandisa zita iroro.
Sierra Leone neGuinea: 1915-1947 Mazuva Okutanga (Chikamu 1)